Ixabiso eliphantsi leVertical Disc Ukuxuba kunye nokuThengisa abaXhasi boMatshini kunye neFektri | YiZheng
Wenza ntoni umatshini weDiskhi yokuDibanisa iDiski?
Inkqubo ye- ID nkqo Ukuxuba YondlaUmr Umatshini ikwabizwa ngokuba yi-disc feeder. Izibuko lokukhutshwa linokulawulwa ngokuguqukayo kwaye ubungakanani bokukhutshwa bunokuhlengahlengiswa ngokwemfuno yokwenyani yemveliso. Kumgca wokuvelisa isichumisi, iUmatshini wokudibanisa idiskhi nkqo Ihlala isetyenziswa ngokudibanisa neerollen granulators ezininzi ze-extrusion ukubonelela nangokondla ngezinto eziphathekayo, okuphucula kakhulu ukusebenza kokondla kunye namandla emveliso
Iimpawu zoMatshini wokuDibanisa iiDiskhi eziDibeneyo
Lo matshini yidrive entsha yokuxuba idiski ethe nkqo, equlathe ipleyiti yokuxuba, ukukhupha izibuko, ukuxuba ingalo, i-rack, ibhokisi yegiye kunye nendlela yokuhambisa. Sisebenzisa ingxubevange enxibe ekhethekileyo yokuhamba kwento ixesha elide lenkonzo. I-disc yokuxuba i-disc feeder evela phezulu kunye nokukhutshwa ukusuka ezantsi ngesakhiwo esifanelekileyo. Uphawu kumatshini kukuba isiphetho shaft isipheleli reducer uqhuba shaft engxamisekileyo engundoqo ukuba isebenze, kunye neshafti udushe iye esisigxina amazinyo udushe, ngoko ke shaft udushe uqhuba amazinyo ashukumisayo ukuxubana umbandela ngokwaneleyo kwaye yenza izinto ukuphuma ngokulinganayo. Ukukhutshwa kwezibuko kunokuvulwa ngokweemfuno zokulawula ukuhamba kwezinto ukuqinisekisa ukuveliswa kakuhle kwayo yonke inkqubo.
Ukusetyenziswa koomatshini bokuXuba abaXhasiweyo beDiski
Luhlobo olutsha Ukuxuba kunye nezixhobo zokondla ukubaleka okuqhubekayo. Isetyenziswa ikakhulu kumzi-mveliso wokuchumisa isichumiso, kwaye sinikezela ngeprojekthi yesichumiso sesitshixo sokuvula kuyilo, ukuvelisa, ukufakela, ukulungisa ingxaki kunye noqeqesho lobuchwephesha. Ingasetyenziselwa kwimichiza, isinyithi, imigodi, izinto zokwakha kunye namanye amashishini.
(1) Inkqubo ye- ID nkqo Ukuxuba YondlaUmr Umatshini Unobomi benkonzo ende, ukonga umbane, umthamo omncinci, isantya esheshayo sokusebenza kunye nokusebenza okuqhubekayo.
(2) Ngaphakathi kwidiski inokufakwa ipleyiti yeplypropylene okanye ipleyiti yesinyithi. Akululanga ukunamathela izinto kunye nokunxiba ukuxhathisa.
(3) Isinciphisi secycloid pinwheel senza umatshini abe neempawu zesakhiwo esihambelanayo, ukusebenza ngokukuko, ukondla okufanayo, kunye nokukhutshelwa kunye nokuthuthwa okufanelekileyo.
(4) Inkqubo ye- ID nkqo Ukuxuba YondlaUmr Umatshini ukondla umbandela ukusuka phezulu, ukukhupha ukusuka ezantsi, okufanelekileyo.
(5) Ukutywina phakathi kwendawo yokudibanisa nganye kuxinene, ke umatshini usebenza kakuhle.
I-disc nkqo yokuXuba uMatshini woKondla uMboniso weVidiyo
I-Disc nkqo yokuxuba uMatshini woPhuhliso weParameter
Ukuphakama kobubanzi (mm)
Egqithileyo Iscrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo
Okulandelayo: Ukulayisha kunye noMatshini wokuTyisa